Kedu ihe kachasị mkpa nke uwe? - Magazin ADL ➡
Kedu ihe kachasị mkpa nke uwe?
Ihe kacha mkpa nke onye dinta bụ:
Okpu oroma fluorescent ìhè ehihie.
Ekike oroma na-egbuke egbuke (jaket, uwe mwụda, uwe elu)
N'otu aka ahụ, Gịnị bụ eziokwu banyere mgbakwasa n'ígwé?
The uwe ị na-eyi n'ọhịa dị ezigbo mkpa. Ha abụghị maka ejiji kama maka nlanarị na nkasi obi. Ụzọ kacha mma isi merie oke ihu igwe bụ uwe na akwa akwa. The oyi akwa N'akụkụ akpụkpọ gị kwesịrị ịbụ ihe dị ka polypropylene, nke na-ewepụ mmiri mmiri ma ọ bụrụ na ị malite ịsacha.
Ọzọkwa, Kedu ihe na-enye ọkụ ọbụna mgbe mmiri dị?
Kedu ihe enyemaka nwere ike inyere gị aka ịmụta?
Kedu ihe kacha mkpa nke dinta nke quizlet uwe?
Kedu n'ime ihe ndị a bụ ụzọ ziri ezi isi gwọọ ịchụ nta ọkụ ọkụ?
Kedu ụzọ kacha mma isi gwọọ ajụjụ ọnụ agwọ tara?
Ogologo oge ole ka ị ga-adị ndụ na-enweghị ed dinta nri?
Kedu ozi gbasara atụmatụ ịchụ nta gị nwere ike inyere ndị mmanye iwu aka?
Gịnị bụ isi ihe mere e ji mee atụmatụ nke ọma maka ịchụ nta?
Kedu ihe mgbaàmà mberede mba ụwa maka ajụjụ nsogbu?
Kedu akụkụ nke anụmanụ egwuregwu bụ ebe kacha dị irè iji gbaa ajụjụ ọnụ?
Kedu otu ọghọm dị n'ịchụ nta site n'ebe dị elu?
Ugboro ole ka ị na-eyi?
Kedu akụkụ ogbunigwe na-adịghị ebutekarị igbu egbu dị ọcha na-emebi ọtụtụ anụ ma na-enye anụmanụ ohere kacha mma iji chọpụta dinta?
Kedu n'ime ihe ndị a mere onye dinta nwere ike isi nweta hypothermia?
Mgbe ị na-aga njem ịchụ nta ị kwesịrị ịpụ?
Kedu nkwupụta bụ eziokwu gbasara nchekwa na nchekwa?
Kedu ihe kpatara ndị dinta kwesịrị iji na-eyi oroma fluorescent ìhè ụbọchị?
Kedu ihe a na-eji akwa akwa akwa maka?
Kedu nzọụkwụ ga-eme ka ị nweta ihe ịga nke ọma n'ịchụ nta ma tinyekwuo ụtọ gị?
Kedu ihe na-enye ọkụ ọbụna mgbe mmiri?
Gịnị bụ etiti oyi akwa?
Kedu ihe na-eme n'ọkpụkpụ contour na maapụ topographic na-egosi quizlet?
Kedu onye ọchụnta nchekwa kwesịrị ịhapụ atụmatụ ịchụ nta tupu ya apụọ njem ịchụ nta?
Kedu ọgwụgwọ ziri ezi maka ọkụ ọkụ nwere ọnya mechiri emechi?
Ọ dị mkpa ka akwa akwa ukwu sie ike?
Ị nwere ike iyi akwa akwa abụọ?
Kedu n'ime ndị a bụ ụzọ ziri ezi isi gwọọ ọrịa strok Hunter Ed?
Kedu akwa oyibo ị na-eyi na ogo iri?
Gịnị ka oyi akwa pụtara?
The akụ na nwere ike inyere gị aka ịmụta banyere ala na otu mpaghara tupu ị bịarutere bụ Topographic Maps.
Na-eyi mgbe niile uwe dabara maka ihu igwe ị na-atụ anya. Gịnị bụ ihe kacha mkpa nke dinta? Ị ga-efunahụ ma chọọ ebe obibi.
Ọgwụgwọ ike ọgwụgwụ ọkụ
Bugharịa onye ihe ahụ mere n'ebe dị jụụ.
Mee ka onye ahụ ṅụọ mmiri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ egwuregwu.
Mee ka onye ahụ ghara ime ihe ọ bụla.
Na-efe efe iji wetuo okpomọkụ nke ahụ, mana atụla oyi karịa.
N'ọnọdụ ndị siri ike, chọọ nlekọta ahụike.
Gịnị bụ ụzọ kacha mma isi gwọọ agwọ? Ọtụtụ ndị dọkịta kwenyere na kasị mma nzaghachi a agwo agwo bụ ịkpọga onye ihe ahụ mere n'ọnụ ụlọ mberede ụlọ ọgwụ. Anwala iwepu nsị na agwọ. Họrọ ezi nkwupụta gbasara ejiji n'ígwé.
A atụmatụ ịchụ nta na-agwa ebe na onye ị bu n'obi ime ichu nta, na mgbe ị na-atụ anya ịlaghachi. O kwesịkwara ịnwe ntụzịaka akọwapụtara na ya gị ụzọ na- gị ebe na-aga na ebe ọzọ ị ga-enwe ma ọ bụrụ na ihu igwe ọjọọ agbanwee atụmatụ gị. Jide n'aka na ị gụnyere gị nọmba ekwentị na ekwentị mkpanaaka.
Iji zere ma ọ bụ ibelata nsogbu, ọ dị mkpa na ị hazie nke ọma n'ihi na ichu nta. Ndị dinta na-ahụ maka ọrụ na-atụ anya nsogbu ndị nwere ike ime ma mee atụmatụ imeso ha ihe. Gbalịa nyochaa ihe egwu dị na ya site n'iji anya nke uche hụ nzọụkwụ ọ bụla nke usoro ahụ ichu nta: Ịkwọ ụgbọ ala na ịchụ nta ebe.
Ọ dị mma, ọ bụrụ ị na-eyi nke ukwuu, ịAga m enweta oke na-ekpo ọkụ, ị'ga-ọsụsọ na-ejegharị na gburugburu na oyi na-atụ, keguru mmiri uwe ụbọchị niile. Karịsịa ma ọ bụrụ ị'na-agagharị agagharị nke ukwuu. Ka o sina dị, n'ígwé bụ ihe dị mma n'ihi na ha na-agbanye ikuku n'etiti ha, nke na-eme ka ihe mkpuchi maka okpomọkụ.
The ebe kacha dị irè ịgba an anụmanụ bụ akụkụ ahụ dị mkpa.
Kedu ihe bụ otu ọghọm dị n'ịchụ nta site n'ebe dị elu? Ị nwere ike ịchọpụta egwuregwu na mbụ. Ị nwere ike ịpụ na eguzo. Ị nwere ezigbo azụ azụ maka ịgba égbè.
Ọbụlagodi na ị emela -eyi ha atọ n'ígwé na mbido, ọ dị mma iwere ihe niile n'ígwé na ọpụpụ ọ bụla: Ị nwere ike bee apụ n'ígwé ọ bụrụ na ihe na-ekpo ọkụ, ma ị nwere ike'etinyeghị ya n'ígwé na ị ewetaghị ya.
In ịchụ nta, isi-na n'akuku na-ezo aka na ọnọdụ nke hunter na ihe-nkwata bu iru na iru. Nke a ogbugba ogbugba adịkarịghị ebute igbu mmadụ dị ọcha, na-emebi ọtụtụ anụ, ma na-enye anụmanụ ohere kachasị mma iji chọpụta onye dinta dị ka anụmanụ dị n'ihu hunter.
ahapụ na njem mee atụmatụ na mmadụ ị tụkwasara obi nye ha ntụzịaka maka ihe ha kwesịrị mee ma ị emela akụkọ azụ n'oge. Ọ bụrụ ị emela ezigbo atụmatụ, it ọ ga-abụ na ị ga-enwe nchekwa na ụtọ ichu nta. Atụmatụ kacha mma abaghị uru ma ọ bụrụ ị ịrapara n'ahụ it!
Conservation pụtara ibelata ojiji nke akụrụngwa sitere n'okike, iji akụ sitere n'okike rụọ ọrụ nke ọma; akpan akpan, akụrụngwa na-adịghị emeghari ohuru. Ichebe pụtara ichekwa ma ọ bụ chekwaa akụ ndị sitere n'okike ugbu a maka ebumnuche iji ha na-eme n'ọdịnihu.
Uwe oroma fluorescent ìhè ehihie na-eme ka ọ dịkwuo mfe maka otu hunter ịhụ na ịmata ọzọ hunter n'ihi na ọ dịghị ihe dị na okike dabara na agba a. Nke oroma agba nke uwe kwesịrị bụrụ nke a na-ahụ anya site n'akụkụ niile. Iwu chọrọ nke a n'ọtụtụ steeti.
A isi oyi akwa dị mkpa maka ịnọgide na-enwe ahụ kwesịrị ekwesị okpomọkụ na ga-ekpochapụ mmiri mmiri (mgbe ọsụsọ na-akpata) site na akpụkpọ ahụ iji kwụsị iru mmiri na oyi na-atụ ọnọdụ. isi oyi akwa nwere ike na-ezo aka ma n'elu na ala.
nghọta gị ịlụ ọgụ ga-abawanye ihe ịga nke ọma ma tinye na ọṅụ of na ahụmahụ nakwa.
n'okpuru ebe 0° Ị ga-achọ atọ ruo anọ n'ígwé maka okpomọkụ n'okpuru ebe oyi. Isi ihe bụ na-ekpuchi. Tinye ya mgbe oyi na-atụ, ma wepụ ya n'ígwé mgbe ị na-ekpo ọkụ.
Ọgwụgwọ ọrịa strok ọkụ
Kechie na mpempe akwụkwọ ma tinye mmiri dị jụụ - ọ bụghị oyi - mmiri.
Onye ofufe, mana ajụla oyi.
Gaa n'ụlọ ọgwụ ozugbo.
A ngwe ahịrị na a map topographic jikọtara isi ihe nha nha elu. Mgbanwe na elu si ngwe kwụrụ na ngwe a na-akpọ ahịrị nkeji oge contour. dị ka 1,600 ma ọ bụ 2,000 ụkwụ.
Ebe nchekwa, ọkụ, akara ngosi, mmiri, nri. Gịnị bụ Mgbama mberede mba ụwa maka nhụjuanya? Mgbọ atọ, mkpọmkpọ nta nta atọ, enyo enyo atọ, ọkụ atọ gbakọrọ ọnụ.
tupu ị na-apụ, hapụ atụmatụ ịchụ nta ya na onye ezinulo ma obu enyi. A atụmatụ ịchụ nta na-agwa ebe na onye ị bu n'obi ime ichu nta, na mgbe ole ị na-atụ anya ịlaghachi. Ọ bụkwa kwesịrị nwere ntụzịaka akọwapụtara n'ụzọ ị na-aga ebe ị na-aga na ebe ọzọ ị nwere ike ịnwe ma ọ bụrụ na ihu igwe ọjọọ agbanwee gị atụmatụ.
Ọkụ nke mbụ na nke abụọ na-agba ọkụ na ọnya mechiri emechi na-eji mmiri oyi agwọ ya kacha mma.
Na-emikpu n'ebe ahụ gbara ọkụ, ma ọ bụ kpuchie ya na akwa akwasara na mmiri oyi - ejila mmiri oyi.
Zere iji bọta ma ọ bụ ude ọ bụla na-esi ísì ụtọ n'ihi na ha nwere ike igbochi ọgwụgwọ ma kpatara mmeghachi ahụ nfụkasị ahụ.
N'ịza ajụjụ mbụ ahụ, okpokoro isi kwesịrị ịdị mma nke ukwuu mana ọ naghị egbochi ya. Ikuku na-ekpo ọkụ mkpa ka ọnyà n'etiti ákwà n'ígwé na-enweghị ike ịpụpụ ya ma ọ bụrụ na ị ga-ekpo ọkụ - ikuku bụ ihe mkpuchi.
ỤWA NKE BASE MAKA OKWU Oyiyi
Na ọnyà ikuku dị mkpa ma ọ bụrụ ị chọrọ ikpo ọkụ n'ihi na ikuku bụ ihe mkpuchi, ọ bụghị akwa. Ọ bụghị ihe ọhụrụ ndị na-agba ugwu eyi uwe abụọ ma ọ bụ ọbụna atọ okpokoro isi n'okpuru mkpuchi mkpuchi ha oyi akwa.
Mgbe okpomọkụ dị n'etiti 5 ruo 10 Celsius, otu onye chọrọ Nkọwa 3 nke uwe, ya bụ a owu polyester ngwakọta thermal dị ka isi oyi akwa, mgbe niile uwe dị ka a t-shirt, uwe elu ma ọ bụ n'elu na a sweatshirt ma ọ bụ cardigan dị ka n'etiti oyi akwa. Maka ala, Denim jeans n'elu owu polyester thermal ga-adị mma.
ịchụ nta na ịgba egbe, egwuregwu
Kedu ọnụọgụ ọnụọgụgụ kacha enweghị usoro?
Kedu ụgbọ ala na -efunahụ ngwa ngwa?